အောင်လံသုခိတာ(အောင်လံ) ၂နှစ်ပြည့်အခမ်းအနား လှူဒါန်းမှု
အောင်လံသုခိတာ(အောင်လံ)အသင်း ၂နှစ်ပြည့်အခမ်းအနား အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ၆.၁၂.၂၀၁၂ နေ့၊ အောင်လံမြို့ ဘိုးဘွားရိပ်သာတွင် ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ အခမ်းအနားအစီအစဉ်များအဖြစ် ဆရာတော်များမှ ကိုးပါးသီလပေး၍ တရားဟောကြားပေးခြင်း၊ ဆရာတော်များအား ၀တ္ထုငွေများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ အဘိုးအဘွားများအား ကန်တော့ခြင်း၊ အဘိုးအဘွားများအား ဂွမ်းစောင်နှင့်စားသောက်ဖွယ်ရာများလှူဒါန်းခြင်း၊ ဆရာတော်မျာအား နေ့ဆွမ်းကပ်လှူခြင်း၊ အဘိုးအဘွားများအား နေ့လည်စာ ကျွေးမွေးခြင်းတို့ ပြုလုပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။
၂နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားတွင် မတည်အလှူရှင် ကိုနောင်နောင်(ကိုရီးယား)မှ အဘိုးအဘွားများအတွက် ဂွမ်းစောင်များကို လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့ အောင်လံသုခိတာ(အောင်လံ) ၂နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားအတွက် ၀ိုင်းဝန်းလှူဒါန်းကူညီကြသော ညီအကိုမောင်နှမများနှင့် အောင်လံသုခိတာအဖွဲ့ဝင်များအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားအပ်ပါသည်။
ဆရာတော်များမှ ကိုးပါးသီလ ချီးမြှင့်နေစဉ်
ဆရာတော်များ နေ့ဆွမ်း ဘုန်းပေးနေစဉ်
အဘိုးအဘွားများအား နေ့လည်စာ ကျွေးမွေးနေစဉ်
အဘိုးအဘွားများအား ဂွမ်းစောင်နှင့်စားသောက်ဖွယ်ရာများ လှူဒါန်းနေစဉ်
အခမ်းအနားဖြစ်မြောက်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော အဖွဲ့ဝင်များ
အောင်လံသုခိတာ . . .
ရေးသားသူ ညီငယ် at 3:25 AM0comments
စင်ကာပူနိုင်ငံ ပရဟိတအသင်းများစုပေါင်းလှူဒါန်းသော တတိယအကြိမ် မြွေဆိပ်ဖြေးလှူဒါန်းမှုနှင့် ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားကို ၂၅.၁၁.၂၀၁၂၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ နဂလိုဏ်ဂူကလေးဝတောရကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ အောင်လံသုခိတာအသင်းမှ တက်ရောက်ပြီး ပရဟိတအသင်းများမှ လှူဒါန်းသော မြွေဆိပ်ဖြေဆေး ၁၅လုံးကို လက်ခံရယူခဲ့ပါသည်။ အောင်လံသုခိတာအသင်းမှ တတိယအကြိမ် မြွေဆိပ်ဖြေဆေးလှူဒါန်းမှုတွင် ယခင်နှစ်များအတိုင်း အလှူငွေ S$600 လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
အလှူငွေ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းကြသော သူငယ်ချင်းများ၊ အသင်းဝင်များအားလုံးကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြွေအ န္တရာယ်
ခံစားကြရသော ပြည်သူပြည်သားများကိုယ်စား အောင်လံသုခိတာအသင်းမှ လှိုက်လှဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
လှူဒါန်းမှုအစုစုကို နတ်လူသာဓုခေါ်ပါစေ . . .
ရေးသားသူ ညီငယ် at 5:54 AM0comments
Labels: လှူဒါန်းမှုမှတ်တမ်းများ, သတင်းနှင့်ဓါတ်ပုံများ
ရေးသားသူ ညီငယ် at 5:50 PM0comments
အောင်လံသုခိတာ လစဉ်အစည်းအဝေးကို 4.11.2012 တနင်္ဂနွေနေ့၊ ညနေ ၇နာရီ၊ Chinese Garden ပန်းခြံတွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အသင်းလက်ရှိလှူဒါန်းမှုအခြေအနေများ၊ စတုတ္ထအကြိမ်ဆရာကန်တော့ပွဲ လှူဒါန်းမှု၊ အသင်းဝင်သစ်များစာရင်းကောက်ယူခြင်း၊ လစဉ်အလှူငွေစာရင်းနှင့် အသင်းရှေ့ဆက်လှူဒါန်းရန် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြမည်ဖြစ်ပါ၍ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ရေးသားသူ ညီငယ် at 5:29 PM0comments
စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အောင်လံမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ ဆရာကန်တော့ပွဲအခန်းအနား မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
30.10.2012 သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့၊ စတုတ္ထ အကြိမ်မြောက် အောင်လံမြို့ပေါ်ရှိ အထက်တန်း အလယ်တန်းနှင့် မူလတန်း ကျောင်းများမှ အငြိမ်းစား ဆရာ/ ဆရာမကြီးများအား အာစရိယ ပူဇော်ပွဲအခန်းအနားသို့ အောင်လံသုခိတာ အသင်းမှ တက်ရောက်ပြီး ကန်တော့ငွေ သုံးသိန်းကျပ် သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်...
တက်ရောက်လှူဒါန်းကြသော အသင်းဝင်များ . . .
အောင်လံသုခိတာအသင်းမှ ဆရာ/ဆရာမများအား ကန်တော့ငွေ လှူဒါန်းစဉ် . . .
ဆရာ/ဆရာမများ . . .
ကျောင်းသား/သူ ဟောင်းများ . . .
ရေးသားသူ ညီငယ် at 4:08 AM0comments
တတိယအကြိမ် စင်ကာပူနိုင်ငံ ပရဟိတမိသားစုများ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးစုပေါင်းလှူဒါန်းနိုင်ရန် အောင်လံသုခိတာအသင်းဝင်များ၊ အခြားသော သူငယ်ချင်းများထံမှ အလှူငွေ စုစုပေါင်း S$1760 ကောက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ကောက်ခံရရှိသော အလှူငွေများထဲမှ တတိယအကြိမ် မြွေဆိပ်ဖြေဆေးစုပေါင်းလှူဒါန်းပွဲသို့ S$600၊ အောင်လံသုခိတာ(အောင်လံ)အသင်းသို့ လက်ရှိလိုအပ်နေသော မြွေဆိပ်ဖြေဆေးဝယ်ယူနိုင်ရန် S$300 ပေးပို့လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိသော အလှူငွေများကို နောက်နောင် မြွေဆိပ်ဖြေဆေးလိုအပ်ပါက လှူဒါန်းသွားရန်နှင့် အခြားသော လှူဒါန်းမှုများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ အသင်းလိုအပ်နေချိန်တွင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားလှူဒါန်းကြသော အသင်းဝင်များ၊ လက်လှမ်းမှီရာ သူငယ်ချင်းများထံသို့ အလှူခံပေးကြသော အသင်းဝင်များ၊ အခြားသော အလှူရှင်များအားလုံးကို အောင်လံသုခိတာအသင်းမှ လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
မိမိတို့၏ လှူဒါန်းမှုအစုစုတို့ကို နတ်လူသာဓုခေါ်ပါစေ . . .
ရေးသားသူ ညီငယ် at 5:56 PM0comments
အောင်လံသုခိတာ၏ လစဉ်လှူဒါန်းလျှက်ရှိသော ဇေယျသုခကျောင်းတိုက်၊စခန်းသာကျောင်းတိုက်နှင့် ဘိုးဘွားရိပ်သာများသို့ ၉.၁၀.၂၀၁၂ နေ့တွင် ဆန်၊ဆီ၊ဆား၊ကုလားပဲ၊ ဆရာ/ဆရာမများအား တစ်သောင်းကျပ်စီကို အောင်လံသုခိတာအသင်းဝင်များမှ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ အောင်လံသုခိတာအသင်းမှ လစဉ်လှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်နိုင်စေရန် ထောက်ပံ့လှူဒါန်းကြသော အသင်းဝင်များအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါကြောင်းနှင့် ဆက်လက်၍ လှူဒါန်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန် ကူညီလှူဒါန်းပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြသော အဖွဲ့ဝင်များ . . .
ရေးသားသူ ညီငယ် at 4:13 AM0comments
ဒီတစ်ပါတ်အစည်းအဝေးကို 9.6.2012 တနင်္ဂနွေနေ့ Chinese Garden MRT မှာပဲ ကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြသည်များကတော့ . . .
-အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသော အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများအား ဆက်သွယ်ရန်၊
-အသင်း Funငွေ လျှော့နည်းနေသဖြင့် အလှူငွေပိုမိုရရှိစေရန် စည်းရုံးအလှူခံသွားရန်၊
-အောက်တိုဘာလ စင်ကာပူပရဟိတမိသားစုများ မြွေဆိပ်ဖြေဆေးစုပေါင်းလှူဒါန်းပွဲရှိရာ
အစဉ်အလာမပျက် အောင်လံသုခိတာအသင်းမှ s$600 လှူဒါန်းရန်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အလှူငွေကို အသင်းရန်ပုံငွေမှမသုံးပဲ အဖွဲ့ဝင်များထံမှသာ ကောက်ခံပြီးအသုံးပြုရန်ကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အလွန်မွန်မြတ်လှသော အလှူဒါနတစ်ခုဖြစ်သော မြွေဆိပ်ဖြေဆေးလှူဒါန်းမှုတွင် ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသော အဖွဲ့ဝင်များ၊သူငယ်ချင်းများအနေဖြင့် အောင်လံသုခိတာအသင်းသို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။
-အဖွဲ့ဝင်အသစ်များ(သို့)အလှူရှင်အသစ်များရရှိလာစေရန် လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်များမှ အောင်လံသုခိတာအသင်း၏ လှူဒါန်းမှုများ၊ ဆောင်ရွက်မှုများကို ရှင်းပြပြီး စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ကြရန်၊
-ထို့ပြင် နိုင်ငံအသီးသီးမှ အောင်လံသူ၊အောင်လံသားများ၊ အလှူရှင်များ ပါဝင်လာစေရန် ကြိုးပမ်းကြဖို့ အစရှိသဖြင့် အကြောင်းအရာအတော်များများကို ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ရပ်ဝေး၊ရပ်နီးမှ ညီကိုမောင်နှများခင်ဗျား. . .
အောင်လံသုခိတာအသင်းမှ လက်ရှိလှူဒါန်းလျှက်ရှိသော ဘာသာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး လှူဒါန်းမှုများ စဉ်ဆက်မပျက်၊ဆက်လက်လှူဒါန်းနိုင်စေရန် မိမိတို့တက်နိုင်သလောက် ငွေအင်အား၊လူအင်အားများဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ရေးသားသူ ညီငယ် at 10:19 PM0comments
အောင်လံသုခိတာ လစဉ်အစည်းအဝေးကို 9.9.2012 တနင်္ဂနွေနေ့၊ ညနေ ၆နာရီ၊ Chinese Garden ပန်းခြံတွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အသင်းလက်ရှိလှူဒါန်းမှုအခြေအနေများ၊ အသင်းဝင်သစ်များစာရင်းကောက်ယူခြင်း၊ လစဉ်အလှူငွေစာရင်းနှင့် အသင်းရှေ့ဆက်လှူဒါန်းရန် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြမည်ဖြစ်ပါ၍ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ရေးသားသူ ညီငယ် at 3:31 AM0comments
အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများကို ဒန်ပေါက်ဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရေးသားသူ ညီငယ် at 3:14 AM0comments